Madaxweynaha cusub ee Zambia, Hichilema, wuxuu jecel yahay Dalxiiska: Guddiga Dalxiiska Afrika wuxuu diyaar u yahay inuu ka qaybqaato
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Madaxweynaha cusub ee Zambia, Hichilema, wuxuu jecel yahay Dalxiiska: Guddiga Dalxiiska Afrika wuxuu diyaar u yahay inuu ka qaybqaato
Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Ogeysiisyada Saxaafadda • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan • Zambia War Deg Deg Ah
Madaxweynaha Zambia Hichilema
Marka Dunida iyo Afrika ay ka hadlaan Zambia waxay ka hadlaan Dalxiiska iyo Naxaasta.
Maanta Hakainde Hichilema ayaa loo xaqiijiyay inuu yahay Madaxweynaha Zambia - iyadoo Dalxiiskan Zambia ku guuleysato.
Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa arkay arrintaas oo si degdeg ah ayay u qireen.
Maalmood ka hor 3 eTurboNews saadaaliyay Hakainde Hichilema si uu u noqdo madaxweynaha cusub ee Zambia. Tani hadda si rasmi ah ayaa loo xaqiijiyay.
Guddiga doorashada ayaa Hichilema ku abaalmariyay 2,810,777 codad oo ka dhan ah ninka la tartamayay ee Lungu oo helay 1,814,201- iyadoo la tiriyay dhammaan marka laga reebo mid ka mid ah 156 degmo doorasho. Sidaa darteed guddoomiyaha guddiga Esau Chuly ayaa ku dhawaaqay Hichilema inuu noqdo Madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Zambia
Mid ka mid ah mas'uuliyiintii ugu horreysay ee caalamiga ah ee u hambalyeeyay Madaxweyne Hichilema ayaa ahaa Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika Cuthbert Ncube. Wuxuu ogyahay sida dalxiiska uu ula jeedo Madaxweynaha cusub ee la doortay Hichilema
Madaxweynaha cusub ee Zambia ayaa sidoo kale ah nin dalxiis ah. Sannad ka hor wuxuu bartiisa Facebook kaga hadlay dalxiisyada Zambia oo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin Victoria Falls, Lumangwe, iyo biyo -dhacyo kale oo aad u qurux badan oo ku yaal Waqooyiga Circut, isagoo aan iloobin Ntumbachushi, Kamabo iyo Kudalila.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu ka hadlay socdaalkii ugu weynaa ee naasleyda adduunka oo laga heli karo Zambia. Farshaxanka dhagaxa taariikhiga ah iyo sawir gacmeedyada inta badan gobolladayaga oo leh Nachikufu caanka ah ee Muchinga.
Kaymaha Chirundu Fossil oo soo jiray ilaa 150 milyan oo sano ka hor, waa isha Zambezi ee Mwinlunga, 750 nooc oo shimbir ah, iyo noocyo kale oo duur -joog ah oo aan tiro lahayn.
Madaxweynaha cusub ayaa sheegay in liiska meelaha loo dalxiis tago aan la koobi karin. Wuxuu sharxayaa in Zambia ay soo jiidato 900,000 oo dalxiisayaal ah sanadkii oo kaliya Victoria Falls oo keliya.
Wuxuu yiri ma aanan dhigin dalxiiska meesha ugu sarreysa, laakiin waxaan u baahan nahay inaan hadda sameyno. Markuu sidaas yidhi, waxay ahayd wax yar ka hor COVID. Qorshihiisu wuxuu ahaa in dalxiisayaasha la gaarsiiyo 2.5 milyan iyadoo dakhliga ugu yar uu yahay 1.9 bilyan oo doolar. Mar haddii adduunyadu ka hesho COVID-19 madaxweynahan cusub waxaa laga yaabaa inuu sii wado qorshahan hoggaamiyaha Zambia.
Maqalka tan, ma aha wax lala yaabo in mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee u hambalyeeya madaxweynaha la doortay uu yahay Cuthbert Ncube, Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB)
Guddiga Dalxiiska Afrika wuxuu u hambalyeynayaa Mudane Madaxweyne Hakainde S Hichilema oo loo doortay Madaxweynaha 7aad ee Jamhuuriyadda Zambia.
Waxaan xushmeyneynaa oo xushmeynaa xiriirka dhow ee aan la leenahay jawharadan Afrika ee ku jira qaab -dhismeedka Dalxiiska.
Zambia waa soosaaraha ugu weyn ee naxaasta adduunka oo mid ka mid ah Mucjisooyinka Adduunka waa soo jiidashada dalxiiska ee Zambia, The Mosi-wa-Tunya.
Cuthbert Ncube, Guddoomiyaha ATB
The Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) waxay taageeri doontaa oo xoojin doontaa xiriirka kala dhexeeya qarankan weyn markii aan dib -u -qaabaynno oo aan dib -u -habeyn ku sameyno Qaaradda Afrika oo ah meel la rabo in la doorto Afrika iyo Adduunka.
Fikradaha Fiktooriya waa bustaha ugu weyn ee biyaha soo dhaca oo muhiim u ah adduunka oo leh astaamaha juqraafiyeed iyo joomorfologi ee leh aragtiyo yaab leh iyo sameynta dhul firfircoon oo ay weheliso qurux aad u wanaagsan oo loo aaneynayo Falls, buufinta ceeryaanta, iyo qaansoroobaad.
Hambalyo Madaxweynaheyga. Waa rajadayda in marka la dhaariyo, aad hormuud ka noqon doonto kala qaybsanaanta awoodaha. In ka badan wax kasta, Zambia wuxuu u baahan yahay sii wadidda siyaasad ka baxsan nidaamyada oo kaliya garsoor madaxbannaan ayaa dammaanad qaadi kara. Tani waxay ahayd mid ka mid ah farriimo badan oo lagu dhajiyay warbaahinta bulshada sida Twitter. Fariintan waxaa soo dhigay Zikomo Kwambili.
Fariin kale oo la dhajiyay ayaa leh:
Hambalyo Madaxweyne Hichilema iyo dadka reer Zambia oo ka codeeyay xadka qabaa'ilka oo muujinaya Zambia weli waa HAL UMAD
Taasi waxay ka dhigaysaa markii saddexaad ee awoodda ay si nabad ah uga wareegto xisbi xaakim ah oo ay u wareegto mucaaradka tan iyo markii dalkii koonfurta Afrika xornimada ka qaatay Ingiriiska 1964 -kii.
Guud ahaan dalka Zambia, dabaaldegyo ayaa ka dhacay waddooyinka iyadoo taageerayaasha Hichilema oo xiran gaduudka iyo jaalaha ee Xisbigiisa United Party for National Development (UPND) ay dheesheen oo heesayeen, halka darawalada ay hoonka u garaaceen.
Hichilema, oo 59 jir ah, oo hore u ahaan jiray maamulaha shirkadda xisaabaadka ka hor inta uusan siyaasadda gelin, ayaa hadda wajahaya hawsha isku dayga inuu dib u soo nooleeyo hantidii Zambia. Dhaqaalaha ayaa xoogaa xoogaa kor u kacay qiimayaasha naxaasta ah ee wanaagsan - hadda waxay kor u dhaafayaan ku dhawaad ​​toban sano oo sarre, oo ay qayb ahaan kor u kaceen kororka baabuurta korantada.
Sannadkii hore, Zambia, oo ah tan labaad ee ugu weyn qodista naxaasta Afrika, ayaa soo saartay wax-soo-saar rikoodh ah.
Lungu, oo 64 jir ah, ayaan weli qiran. Waxa uu tilmaamay in laga yaabo inuu ka dhiidhiyo natiijada, oo adkaan doonta, marka la eego farqiga.